केहीबेरमा मन्त्रीपरिषद् विस्तार हुँदै, को–को बन्दैछन् मन्त्री ? — Imandarmedia.com
केहीबेरमा मन्त्रीपरिषद् विस्तार हुँदै, को–को बन्दैछन् मन्त्री ?
काठमाडौ। बागमती प्रदेशमा केहीबेरमा मन्त्रिपरिषद् विस्तार हुने भएको छ । मुख्यमन्त्री अष्टलक्ष्मी शाक्यले सरकारको नेतृत्व लिएको २१ दिनपछि मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्न लागेकी हुन् । मुख्यमन्त्री शाक्यले आज मन्त्रिपरिषद विस्तार गर्ने तयारी गरेको नेकपा एमाले बागमती प्रदेशका प्रमुख सचेतक दिपक निरौलाले जानकारी दिए ।
मुख्यमन्त्री शाक्यले आज ५ जना मन्त्री र ४ जना राज्यमन्त्री नियुक्त गर्ने तयारी भइरहेको प्रमुख सचेतक निरौलाले बताए । मुख्यमन्त्री शाक्यले आज मध्याह्न १२ बजे मन्त्रीहरु नियुक्त गरी शपथ गराउने तयारी भइरहेको उनले बताए ।
मन्त्रीको लागि सिन्धुलीबाट प्रदीप कटुवाल,रामेछापबाट शान्तिप्रसाद पौडल, काभ्रेबाट चन्द्र लामा, काठमाान्डौबाट अजय कान्ती, चितवनबाट विजय सुबेदी, दोलखाबाट रचना खड्का,मकवानपुरबाट जुनेली माया श्रेष्ठ , भक्तपुरबाट सरस्वती वाटी नुवाकोटबाट वद्री मैनाली रहेका छन्।
यस मध्ये ५जना फुल मन्त्री तथा ४ राज्यमन्त्री राज्यमन्त्री थप हुने श्रोतले जनाएको छ। मुख्यमन्त्री शाक्य गत भदौ २ गते मुख्यमन्त्री नियुक्त भएकी हुन् । लामो समय एमालेमा माधवकुमार नेपालको पक्षमा रहँदै आएकी उनी प्रदेश सरकारको नेतृत्व गर्नुअघि एमालेमै रहने निर्णयमा पुगेकी थिइन् ।
भदौ २ गते मुख्यमन्त्री बने लगत्तै शाक्यले २ जना मन्त्री नियुक्त गरेकी थिइन्। २ जना मन्त्रीमध्ये सामाजिक विकास मन्त्री कृष्णप्रसाद खनालले माधव नेपाल नेतृत्वको पार्टीमा सनाखत गर्दै पदबाट राजीनामा दिइसकेका छन् भने अर्का मन्त्री केशव राज पाण्डेले सरकारको प्रवक्ताको जिम्मेवारीसहित आन्तरिक मामिला तथा कानुन र भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय सम्हाल्दै आएका छन् ।
बागमती प्रदेश सरकारको नेतृत्व गरेको एक सातामै मुख्यमन्त्री शाक्य अल्पमतमा परेकी छन्। नेकपा एमाले विभाजनपछि शाक्य नेतृत्वको प्रदेश सरकार अल्पमतमा परेको छ। मुख्यमन्त्री शाक्यले राजीनामा नदिने बताएकी छन् । उनले प्रदेशसभामा विश्वासको मत लिने संकेत गरेकी छन् ।
यसै गरि : झण्डै साढे दुई अर्ब पचाउन चाप्लुसी गर्दै सिवम् सिमेन्टले चलखेल गरेको खुलासा भएको छ। सिवम् सिमेन्ट नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई बिजुली उपयोग गरेबापत तिर्न पर्ने दुई अर्ब ३४ करोड रुपैयाँ नतिर्न साम, दाम दण्ड, भेदको नीतिमा उत्रिएको छ । सिमेन्टले बिजुली प्रयोग गरे बापत तिर्न पर्न रकम नतिरेर फकाउने, गलाउने, धम्क्याउने, तर्साउने रणनीति बनाएको हो ।
त्यसको सुरुवात विगतदेखि गर्दै आएको थियो । विभिन्न मन्त्रालय, तालु अड्डाहरूलाई आफ्नो प्रभावमा पार्नका लागि भित्रभित्रै चलखेल गरिरहेको सिमेन्टले त्यसमा असफल भएपछि सार्वजनिक रूपमै चाप्लुसीमा उत्रिएको छ ।
यसको सुरुवात भदौ १६ गते सार्वजनिक विज्ञप्ति निकालेर गरेको छ । आफूले विद्युत् प्राधिकरणलाई तिर्न पर्ने कुनै महसुल नरहेको भन्दै झुट बोलेको सिमेन्टले आज लगानी बोर्डलाई खुसी पार्न एक दैनिक पत्रिकामा बधाई सहितको विज्ञापन प्रकाशन गरेको छ ।
आज लगानी बोर्डको दसौँ वार्षिकोत्सवको हो । आजभन्दा १० बर्षअघि तत्कालीन प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले लगानी बोर्डको स्थापना गरेका थिए । यही अवसरमा सिमेन्टले लाखौँ खर्च गरेर पत्रिकाहरूलाई ज्याकेट लगाइदिएको हो ।
वैदेशिक लगानी भित्र्याउन स्थापना गरिएको बोर्डले बेलाबेलामा लगानी सम्मेलन गरेर विदेशी लगानीकर्तालाई आकर्षित गरिरहेको छ । सिवम् सिमेन्टले चीनको ठूलो सिमेन्ट उद्योगसँगको सहकार्यमा नेपालमा होङ्सी सिवम् सिमेन्ट उत्पादन गर्दै आएको छ । यो पनि बोर्ड मार्फत आएको लगानी हो ।
सुरुमा प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक सहितका कर्मचारीलाई प्रलोभनमा पारेर विद्युत् महसुल नतिर्ने पक्षमा रहेको सिमन्ट कम्पनीले प्राधिकरणमा कुलमान घिसिङको आगमनसँग सार्वजनिक रूपमा बिजुली महसुल नतिर्ने घोषणा गरेको हो । कुलमानले जसरी पनि महसुल उठाउन सम्बन्धित कार्यालयका ताकेता गरेपछि सिमेन्टले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयलाई समेत प्रभावमा पार्नका लागि विज्ञापन बाजीमा उत्रिएको हो ।
लगानी बोर्डको अध्यक्ष प्रधानमन्त्री रहने व्यवस्था छ । नेपालको पहिलो महिला आर्जु राणालाई प्रभाव पार्नका लागि यो विज्ञापन गरिएको श्रोतको दावि छ । वैदेशिक लगानी भित्र्याउन पनि सिमेन्टले केही प्रक्रिया पुरा नगरेकाले पनि यो तहको चाप्लुसी भएको सिमेन्ट श्रोतकै दावि छ
।कुरा महसुलको मात्र छैन् सिवम् सिमेन्टले बनेका अधिकांश संरचनाहरू निर्माण भएपछि पनि लामो समय टिक्दैनन् । उक्त सिमेन्टले बनेका संरचना भूकम्प प्रतिरोधी नहुने र छिटै भत्किने विज्ञहरूको भनाई छ ।
नेपाल गुणस्तर तथा नापतौल विभागले दिएको जानकारी अनुसार सिमेन्टमा म्याग्नेसियम अक्साइड (एमजिओ)को मात्र नेपालको मापदण्ड भन्दा बढी प्रयोग भइरहेको छ । शिवम् सिमेन्टमा म्याग्नेसियम अक्साइडको मात्रा ५ दशमलव ८ प्रतिशत भन्दा बढी भएको पाइएको विभागले जनाएको छ ।
सिमेन्टले म्याग्नेसियम अक्साइडको मात्र बढी हालेर उत्पादन गरिरहेको भन्दै विभागले कारवाहीका लागि यस अघिनै सिफारिस गरिसकेको छ । नेपालको मापदण्ड अनुसार म्याग्नेसियम अक्साइडको मात्रा ५ प्रतिशत भन्दा तल हुनुपर्छ अर्थात् ३ देखि ५ प्रतिशतसम्मको म्याग्नेसियम अक्साइडको प्रयोग भएको सिमेन्टलाई राम्रो मान्ने गरिन्छ ।
गुणस्तर तथा नापतौल विभागले गरेको ल्याब टेष्टमा शिवम् सिमेन्टमा म्याग्नेसियम अक्साइडको मात्रा मापदण्डभन्दा बढी पाइएको थियो । विभागले गरेको नमुना सङ्कलन र परीक्षणका क्रममा सिमेन्टमा एमजिओको मात्रा ५ दशमलव ८ प्रतिशतसम्म भेटिएको थियो ।
यसरी आफ्नो उत्पादन गुणस्तरहीन बनाउने, सरकारलाई तिर्न पर्ने कर नतिर्ने र बिजुली महसुल तिर्न आनाकानी गरेर बदनाम बनेको कम्पनीले चाप्लुसी गरेर जनतामा भ्रम छरिरहेका छ ।